Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị otu Lufthansa na -ekwupụta ọkwa onye isi nchịkwa ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Jörg Eberhart họpụtara onye isi ndị isi nke Lufthansa Group
Jörg Eberhart ga -anọchi William Wilms, onye ahọpụtara na Kọmitii Executive nke Lufthansa Technik na 1 Septemba 2021.
Lufthansa Group kwuputara ọkwa onye isi ọhụụ.
Onyeisi ọhụrụ nke atụmatụ & mmepe otu aha ya bụ.
Jorg Eberhart ga -ewere ọnọdụ na Nọvemba 1, 2021.
N'October 1, 2021, Jörg Eberhart, onye isi ugbu a nke Air Dolomiti, ga -ewere ọnọdụ nke "Isi nke Strategy & Development Organisation" na Lufthansa Group. Ọ ga -anọchi William Wilms, onye ahọpụtara na Kọmitii Executive nke Lufthansa Technik na 1 Septemba 2021.
Jörg Eberhart ejewo ozi dị ka Onye isi ala na onye isi oche nke Air Dolomiti kemgbe 2014. N'oge a, ọ bụkwa onye otu Executive Board nke Lufthansa CityLine. Tupu nke a, o nwere ọtụtụ ọrụ nchịkwa na Lutù Lufthansa nke gụnyere isonye na ntọala Aerologic GmbH yana mmejuputa oru ngo SCORE.
Jörg Eberhart gụrụ nchịkwa azụmaahịa na Mahadum Tübingen wee nwee ikikere ọkwọ ụgbọ elu maka Airbus A320.
Otu Lufthansa bụ otu ụgbọ elu na -arụ ọrụ n'ụwa niile. N'inwe ndị ọrụ 110,065, Lufthansa Group mepụtara ego nke EUR 13,589m na afọ ego 2020.
Otu Lufthansa nwere ngalaba Network Airlines, Eurowings na Ọrụ ụgbọ elu.
Ọrụ ụgbọ elu nwere ngalaba lọjistik, MRO, nri na azụmaahịa ndị ọzọ yana ọrụ otu.
Nke ikpeazụ gụnyekwara Lufthansa AirPlus, Ọzụzụ ụgbọ elu Lufthansa na ụlọ ọrụ IT. Akụkụ niile na -ebute ọkwá dị elu n'ahịa ha.